Zvinorevei Mabheya Mukurota Zvirimubhaibheri? - Zvinoreva Zvemubhaibheri
iphone wont call call dzakundikana
zvinorevei hamba pamweya
maitiro ekudzima zvachose mapikicha pane iphone
Zvinorevei Mabheya Mukurota Zvirimubhaibheri?
Zvinorevei mabheya muzviroto zvebhaibheri ?.
Mabheya imhuka dzinoenderana nehunhu hwadzo; ese anosiyana zvichienderana nerudzi rwawo. Ndicho chikonzero nei zvinotendwa kuti chokwadi chekurota nemapere chine chekuita nemabatiro atinoita uye mune ese mamiriro ezvinhu atinorarama uye anotarisana nehupenyu hwedu hwezuva nezuva.
Unotarisana sei nematambudziko ako? Icho chinhu chaunofanirwa kuzvibvunza iwe kana iwe uine hope nehope. Iwe une yakadzikama kana kusava nehanya nemafungiro kune zvinhu zvinoitika kwauri zuva nezuva, uye mukati iwe urikuchengeta huzhinji hwehasha. Mukati mezvinoreva zvirotoangave ari kufananidzira kwechido chekutaura munzira dzose.
Munyika yekurota, zvinoenderana nenyaya yekuti ivo vanonyevera nezve iyo kuenzanirana kwerombo rakanaka . Saka, vanhu vazhinji, pavanorota pamusoro pemhuka idzi, edza kubheja pamitambo sezvo vachigona kuwana kukunda.
Kududzirwa kwezviroto nemapere inoenderana nehurukuro . Uye kune vamwe, zvinongoreva kuti kune vanhu vakatikomberedza vanotaura zvakaipa kwazvo kumashure kwedu. Saka iwe unofanirwa kuziva nezve zvinoitika kuhope dzako . Pamwe ari kukuyambira nezvehutsinye hune muvengi wako uye nenzira ine njodzi yaanokutevera.
ZVINOREVEI KUFUNGWA NEZVEBHEYA?
Zvinokurudzirwa kuti kurota nemapere yakavakirwa pamaitiro emunhu. Kunyanya mumamiriro ezvinhu, iwe unotarisana zuva nezuva. Iwe unogona kuve wakadzikama munhu, wakadzikama kwazvo, kana iwe unogona kuve unodzivirira zvakanyanya kune vako vaunoda.
Zvakare, kurota nezvemapere kunogona kukuudza kuti uri munhu asina kujaira kudzora kutsamwa kwavo . Kana iye haazive mashandisiro ehasha dzake; ehe, mune zvakaipisisa, iwe unopedzisira wave kuita munhu wemusango asingazive kuzvidzora.
Iwe unofanirwa kuziva nezvekuti bere rinozviratidza sei kwauri muchiroto sezvo chiri icho chikonzero chezvinoreva zviroto uye izvo zvauri kusangana nazvo. Muzviitiko zvakawanda, kana iwe ukarota mabhebhi akadzikama, izvo zvinoreva kukunda uye kukunda , uye iwe unogona kugadzirisa matambudziko.
Kurota kwemapere madiki
Kunyangwe inogona kuve yakapfava, madiki mabheya chiyeuchidzo chiri nyore icho haufanire kurerutsa vavengi vako. Zvakanaka, zvinogona kuve zvakakura uye zvinotyisa, uye iwe unofanirwa kutora hanya nezvavo zviri mukati manzwiro.
Iyi kurota inogona kuve yekufona kuti uchenjerere nevanhu vaunosangana navo. Kunyangwe iwe usingazive, vanogona kuve muvengi wako akaipisisa; ehe, iwe unofanirwa kutarisa nekuti vane hutsinye. Mukati me zvinoreva zviroto, ivo uya nechinangwa chekukuparadza iwe nekukonzera kukuvara kwakawanda muhupenyu hwako, uye ivo vanongotarisira kuona iwo mukana uripo ivo pachavo.
Zviroto nemapere ebrown
Iwe unofanirwa kuve wakanyatsoteerera nekuti mabhuru mashava mumaroto ako mirira kuvengana kwako . Uye ivo vari kuramba vachitsvaga kukuvara mune dzakawanda mamiriro. Kana iwe uri murume, iwe unofanirwa kutarisira vanhu vakakukomberedza vasingafambidzane. Eya, uyu munhu, kunyange achiratidzika kuva ane moyo munyoro uye ane rupo, anogona kuvanza vavariro dzechokwadi dzaanadzo kukuparadza.
Kana iwe uri mukadzi, iwe unofanirwa kutarisira vakadzi vanotyisa, avo vanoramba vachiita majee mazhinji uye kuseka zvakanyanya. Zvakanaka, ivo vanogona kutsvaga kukukuvadza iwe murudo. Kunyangwe iwe uchifunga kuti ivo vanhu vane mutsa, ivo havasi. Mukati memwoyo wake, munhu anoda kutsiva uye ane godo; haana chaanokanganisa kana zvasvika pakuparadza vamwe.
Kurota kwemapere shava
Ichi chiratidzo chakanaka mukududzirwa kwehope nemapere. Kurota kwemapere shava zvinoreva kuchengetedzeka uye kuvimba. Iwe shinga kusangana nemamiriro ezvinhu anomuka muhupenyu hwako. Iwe une hunyanzvi uhwo, mune zvemagariro, izvo zvisingawanzo kuwanikwa. Saka iwe unofanirwa kudada kuve munhu akashinga uyo anotarisana nekutya nekukurumidza.
Iwe uri munhu asingatyi kutarisana nekutya kwavo uye kuvakunda. Iwe wakasiyana; uri chinhu chinoparadzira kusagutsikana uye unokunda muhupenyu.
Kurota nemapere evacheche
Kana iwe uchiramba uchinzwa munhu anodikanwa kune vamwe, izvi ndizvo zvinoreva zviroto nemabheya emwana. Iwe unonzwa kudiwa kwaamai vako kuti vakubhabhatidze, uye ini ndakakuda, uye unofanirwa bata pfungwa vadikani kufunga kuti une nzvimbo panyika.
Kurota kwemapere polar
Iko kududzirwa kwehope kwakabatana zvakanyanya nechiratidzo chekuyedza uye kuti chinoenderana sei nechinangwa chako; Inokuratidza kuti iwe unogona kuona hupenyu nenzira dzisiri. Inomiririra zvakaipa, kusaruramisira, hurombo
Vanhu vazhinji vakakukomberedza vanogona kuita kuti utende kuti hupenyu hwako hahuna kunaka sekufunga kwako. Saka zvaizobatsira kana iwe ukave unofungira nekuti ndiyo ichave nzira yavanotsvaga kukuparadza. Iwe unofanirwa kuve netariro kwazvo kuti pasave nemunhu anokuendesa kune kuora moyo uye kusava netariro.
Zvakare, iyo polar bere inoratidza kudiwa kwerusununguko kubva kune ese akachengetedzwa manzwiro sezvo achikanganisa muviri wako. Ramba uchifunga kuti hazvina kunaka kuchengetedza zvaunonzwa mukati mako kwenguva refu. Nyatsoteerera kune izvo zvinhu zvinoitika kwauri mukati mekududzirwa kwezviroto.
Kana muzviroto zvako bere rinotyisa rine hukasha , izvi zvinokuyambira kuti uchaita kurwa neshamwari dzako , uye unofanira kuzvibata kuti udzivise mamiriro akadai nekuti iwe nevaya vakakukomberedza mungakuvara. Rangarira kuramba wakangwara pane zvese zvaunoita.
Kurota nemapere ane hasha
Inomiririra kusagadzikana uye kushungurudzika ; izvi ndizvo zviri kutaurwa nebere rine hukasha mune iyo pfungwa. Munguva pfupi yapfuura, haunzwi wakasimba, uye iwe unofunga kuti muvengi wako arikukurova. Inogona kuve mushandi pamwe chete, kana kuchikoro. Zvisinei nharaunda iyo inoitika mamiriro, iwe unofanirwa kuziva kuti haufanire kutarisira pasi chero munhu . Kuti iwe unogona kugadzira marongero anogona kuita kuti zvinangwa zvako zvionekwe. Uye uve unonakidza kupfuura vamwe, pasina kukuvadza chero munhu. Iva akangwara.
Kunyangwe pandas zvisikwa zvakanaka uye zvinoyevedza, muzviroto nemapere bheya, zvinogona kuve chiyeuchidzo. Kutanga, izvo inofananidzira ukuru uye simba munhu ane. Rangarira kuti iwe une simba uye uri kuramba uchikura, uye kusaziva kwako kuri kukuudza.
Kurota uku kunogona kududzirwa mukati mezvinoreva zviroto izvo iwe wave kuda kugara mumamiriro ezvinhu anokusiya wakaneta mumuviri nepfungwa . Uye iwe unofanirwa kuve nekuchengera kuzvitarisira iwe uye ugone kuzvikunda pasina kukuvadza.
Kurota kwetoyi panda zvinoreva kuti haukanganwe hudiki hwako. Kurota uku kunogona kuve hwindo rinokuyeuchidza nezvehwo hwako hwakanaka uye hunofadza hudiki uye kukura kwawakaita. Zviitiko zvakaipa zvawakasangana nazvo muhupenyu zvakakutorera kure nezvinhu zvakanaka izvo zvakakufadza.
Kana muhope dzako uchiuraya panda, izvi zvinoreva kuti wave kuda vanotambura kurasikirwa kukuru . Nezve mudiwa, uye iwe unofanirwa kuve une simba kutarisana neichoicho. Kana mukurota ari mumwe munhu anouraya panda, zvinopesana zvinoitika. Izvi zvinoratidza kuti vazhinji vevavengi vako vanozove nekurasikirwa kwakakura kunozovarwadzisa.
Zviroto nemapere machena
Inomiririra kuramba uye kusimba mukati mezvinoreva zviroto uye anotarisana nenguva dzakaomesesa dzinoratidzwa kana kuunzwa muhupenyu hwako.
Kurota kwemabere matema
Zviroto pamusoro pemapere nhema . Unotsamwa nekukurumidza, uye hope dzako dzinoyambira kuti iwe uri munhu akananga kutsamwisa . Uye kana izvi zvangoitika, zviito zvako zvinogona kuuraya uye kukuvadza. Kana pakurota ukatarisana nebere dema, zvinoreva kuti iwe unofanirwa kuve une moyo munyoro munzvimbo yako.
Kana bere dema rakakurwisa, izvi zvinoreva kuti uri munhu ane hasha ; Inguva yekuwedzera kutsungirira nemaitiro evamwe.
Zviroto zvine teddy bere
Kurota kwemapere kunoratidza kuti uri munhu uyo kushuva uye kusuwa muhudiki . Uye iwe unofanirwa kuporesa maronda kuti ufambe kuenda kumberi, kuti ugone kunakirwa nemamiriro ezvinhu chaiwo anouya nenzira yako.
Brown mabheya, anokuratidza muzviroto zvako iyo inoda kukunda kufungidzira kuti uzive zviri nani, unofanirwa kuzviona sezvauri, kuenderera mberi.
Kurota nemapere ane usimbe
Iwe unofanirwa kuve wakangwarira kwazvo pabasa rako kubvira iwe urikuregeredza zvinhu zviri kuitika munzvimbo yako yebasa . Saka iwe unofanirwa kuve unoteerera, vanhu vazhinji vanotenda mune yako tarenda, unoshuvira kubudirira kwako zvinoenderana nevanoongorora kududzirwa kwezviroto.
ZVIMWE ZVINODIWA ZVEHOPE NEEMABERE
Kurota bere richidya uchi: it zvinoreva kuti ndiwe kutya kurasikirwa zvinhu zvemidziyo kana kurasikirwa kwehupfumi mune rako basa. Saka iwe unofanirwa kuve wakasununguka muhupenyu hwezuva nezuva, iwe unogona kubata rako bhizinesi zvakanaka uye nenzira yaunodyara. Chero bedzi iwe uchiteerera kune ese mafambiro aunoita kuitira kuti vawane imwe purofiti uye kwete kurasikirwa.